Izifundo zaseFrance - i-BLI Quebec - isikole solimi se-BLI eCanada
Izikole zethuBLI iQuebec
Ukucwilisa Okugcwele Emzini oligugu
Itholakala endaweni eyisimanga kunazo zonke, isikole sizungezwe izakhiwo, ukudla nokuthenga. Yindawo okufanele ube kuyo!
Amakilasi ethu amancane akuvumela ukuthi wakhe ubudlelwano futhi ukunika ithuba lokuzijwayeza ulimi ngokuqhubekayo!
Ngamakhulu wezindaba eziyimpumelelo, uzofuna ukuba enye! Bheka obunye bobufakazi bese uzibonela!
Yiza ku-QuEBECIZIPHUMA ZETHU KAKHULU
BLI iQuebec isikole saseFrance eCanada esisenkabeni yeQuebec City. Ikhampasi yethu isendaweni enhle, iNouveau Saint-Roch, okuyindawo ethambekele kakhulu eQuebec City. Kuseduze nenqwaba yemisebenzi idolobha elingayinikeza: ezomlando, amasiko, okuphathelene nokudla nokuheha izivakashi!
QuebecFunda ezweni elihle lamagugu
I-BLI Quebec yasungulwa ngonyaka we-1976, kanti ibinikela izifundo zaseFrance eQuebec City kubafundi bamazwe aphesheya emhlabeni jikelele!
Iqinisekiswe yizilimi zaseCanada, iBLI Quebec ineminyaka engu-42 yamava enikeza izifundo zaseFrance njengolunye ulimi. Izikhungo zethu zesimanje zinikeza abafundi umoya okhululekile futhi omnandi owenza inqubekelaphambili yokufunda ibe mnandi futhi imnandi.
Uma ufuna ukufunda isiFulentshi, woza ku-BLI futhi uphile isipiliyoni sokufunda ngokucwiliswa esiyingqayizivele.
12 Abafundi Ekilasini ngalinye
1 Ikhompyutha Lab
1 Indawo yokudlela
IQuebec idolobha elihle lamagugu aseCanada. Inhliziyo yesiko elikhuluma isiFulentshi eMelika. Ucezu lweYurophu ezwenikazi elisha.
Itholakala emabhange amahle oMfula iSt-Lawrence, iDolobha iQuebec ngenye yamadolobha amahle kakhulu emhlabeni, nenhloko-dolobha yesifundazwe saseQuebec.
Idolobha elikhulu kunazo zonke elikhuluma isiFulentshi eCanada, iQuebec City iyindawo ekahle yokuntywila ngolimi lwesiFrance ngenkathi ujabulela konke i-Quebec okufanele kukunikeze, kusukela ekubukeni komkhomo eTadoussac, kuya ekunambeni kwewayini eMalokishini aseMpumalanga.
Ihhotela elithathwe izithombe kunabo bonke emhlabeni, iChateau Frontenac, iseQuebec City.
IQuebec City iseduze nezindawo zokuphumula ski eziphezulu zomhlaba.
Yasungulwa ngo-1605, iQuebec City idolobha elidala kunawo wonke eCanada
Omunye wemicimbi emikhulu eQuebec City yiWinter Carnival, eyenzeka njalo ngoFebhuwari
IQuebec City iyikhaya le-Ice Hotel eyaziwayo, eyakhiwa njalo ebusika.
Bangaphezu kwama-95% abantu abakhuluma isiFulentshi
IQuebec City idolobha lesibili elinabantu abaningi esifundazweni saseQuebec, ngemuva kweMontreal.
Izindleko zokuphila eQuebec ziphakathi kwezinto eziphansi kakhulu eCanada
Ikhofi - $ 2.00
Ithikithi le-Movie - $ 12.00
Isidlo sasemini - $ 10.00
Ukudla kwakusihlwa - $ 20.00
Iphakethe lokuhamba - $ 81.25 / ngenyanga
IQuebec inezinto eziningi ezihlukile ongakujabulela nsuku zonke!
Ukuvakashela i-Ile d'Orleans
Impucuko ye-Musée de la
ICarnaval de Quebec
I-Parc National de la Jacques-Cartier
ComedieHA!… Nokunye okuningi!
I-BLI ithatha ukufunda ngaphesheya kwekilasi.
Phila ulimi olufundayo ngokubamba iqhaza kuhlelo lwethu lomsebenzi olunikeza imisebenzi emihle nsuku zonke.
I-BLI inikeza uhlelo lomsebenzi omuhle kakhulu futhi sikukhuthaza ukuthi ubambe iqhaza emisebenzini yethu ngangokunokwenzeka. Ukubamba iqhaza kuzokuvumela ukuthi uxhumane nabangane futhi uhlole futhi uthole impilo namasiko eMontreal kanye / noma eQuebec City futhi kukunikeze nethuba lokuzijwayeza ulimi olufundayo ngaphandle kwekilasi.
Uzokwazisa okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ozokukhumbula impilo yakho yonke. Uhlelo lwethu lomsebenzi lunikeza ithuba lokuthola nokuhlola idolobha lapho ufunda khona. Khululeka futhi uchithe isikhathi nabangane bakho abasha bamazwe omhlaba ngenkathi uqhubeka nokuqhuba isiNgisi noma isiFulentshi sakho endaweni yokuphumula futhi uhlangane nabangane abasha.
Uhlelo lwethu lomsebenzi luhlukahluka kusizini nonyaka futhi lufaka imisebenzi efana nokuhamba ngesikebhe, i-rollerblading, amakilabhu ezingxoxo, ubusuku be-karaoke, ubusuku be-movie, amaqembu abafundi, ukuhamba ngebhayisikile, ukuvakasha, ukuhambela iminyuziyamu, ukuya kumakhonsathi, nokuningi.
Eminye imisebenzi imahhala kanti eminye inendleko ezoncika kuhlobo lomsebenzi.
Yonke imisebenzi iholwa ngumxhumanisi wemisebenzi kanye / noma uthisha.
Indawo yaseQuebec ikuvumela ukuba uthole izindawo eziningi ezinhle eduze kwedolobha
Olunye uhambo lwethu lwangempelasonto kanye nokuphuma yile:
Izimpophoma zaseToronto neNiagara
* Ukuya e-USA
Olunye uhambo lwangezimpelasonto lubandakanya ukuya e-USA ukuyothenga noma eminye imisebenzi. Uma uhlela ukungena e-USA ngenkathi ufunda eQuebec, udinga i-USA Visa evumelekile. Kufanele ufake isicelo se-visa yakho yase-USA ngaphambi kokuza eCanada. Uma uvela emazweni aseNtshonalanga Yurophu naseJapan akudingeki ufake isicelo seVisa yase-USA ngaphambi kwesikhathi, njengoba uzokwazi ukuyithola kusuka e-USA Immigration emngceleni. Iphasiphothi yakho kufanele isebenze okungenani izinyanga eziyisithupha futhi ifundwe ngomshini.
Uma une-visa yaseCanada yokungena eyodwa, kufanele uvunyelwe ukuya e-USA inqobo nje uma ngabe i-visa yakho isebenza futhi ubuyela eCanada ngaphambi kokuphela kokuhlala kwakho okuvunyiwe eCanada (http: //www.cic.gc .ca).